एयरट्यागहरू ह्याक गर्नुहोस्, म्याकबुक एयर र अन्य धेरै दर्साउनुहोस्। म मा म बाट मा हप्ता को सबै भन्दा राम्रो म म्याकबाट हुँ
एयरट्यागहरू ह्याक गर्नुहोस्, म्याकबुक एयर र अन्य धेरै दर्साउनुहोस्। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
यो आशा गरिएको छ कि अर्को हप्ता एप्पलको एयरपड्स तीनको बारेमा खबर हुन सक्छ तर एयरपडहरूको बारेमा मात्र होइन, एप्पल म्यूजिकले हाई-फाई ध्वनिको गुणस्तर थप गर्ने सम्भावनाको बारेमा कुरा पनि गरेको छ। तर अब हामी भविष्यलाई बिगतको लेखहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न गइरहेका छौं। र यो यो हप्ता हामीले पाएका छौं एप्पल संसारमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण समाचार र ती मध्ये केही हामी तपाईंहरू सबैको साथ आज आइतवारलाई याद राख्ने छौं।
यी समाचारहरूको पहिलो बारेमा हो एयरट्यागको «ह्याकिag।। यो ती समाचारहरू मध्ये एक हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ तर त्यो सिद्धान्तमा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन, र यो बारे हो एकदम एक "कमजोर" ह्याक जुन सबै चिन्ताजनक हुँदैन.
यो हप्ता त्यहाँ पनि थियो नयाँ म्याकबुक एयर के हुन सक्छ भन्ने प्रस्तुत गर्नुहोस् यस वर्षको। को राम्रो जोन प्रोसर, यी एप्पल म्याकबुक एयरको सम्भावित डिजाइन देखाउँदै थिए र यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले यसलाई धेरै मन पराइरहेका छन् यद्यपि यो सत्य हो कि हामीले कुनै पनि समयमा भनिरहेका छैनौं कि यो अन्तिम डिजाइन हो।
के तपाई एप्पलले खेल कन्सोल सुरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? खैर, त्यहाँ एक अफवाह छ जस्तो देखिन्छ कपर्टिनो कम्पनी कन्सोल सुरूवात गर्न इच्छुक हुनेछ वा कमसेकम यसमा काम गरिरहेको छ। यस हप्ता हामीले खबर देख्यौं।
अन्तमा हामी तपाईंसँग सबै समाचार साझा गर्न चाहन्छौं पहिलो Geekbench स्कोर एक M24 प्रोसेसरको साथ २-इन्च iMac को। बिघ्नकर्ताको रूपमा र यदि यो कुरा हो भने तपाईंले पहिले खबर पढ्नु भएन हामी तपाइँलाई भन्दछौं कि यो एकदम उच्च अ is्क हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » एयरट्यागहरू ह्याक गर्नुहोस्, म्याकबुक एयर र अन्य धेरै दर्साउनुहोस्। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
अमेरिका मा एप्पल स्टोरहरु मा मास्क अझै अनिवार्य छ